Darktable 3.0 ဗားရှင်းအသစ်တွင်အသစ်ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသော interface နှင့်ပါ ၀ င်သည် Linux မှ
Darktable 3.0 ဗားရှင်းအသစ်သည်အသစ်ပြန်လည် interface နှင့်အတူရောက်ရှိလာသည်
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တစ်နှစ်ပြီးနောက် တက်ကြွစွာ, ဗားရှင်းအသစ်စတင်ခြင်းကိုကြေငြာခဲ့သည် ဒီဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံများစုစည်းခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက်အစီအစဉ်၏ Darktable 3.0။ အိပ်မက်ဆိုး Adobe Lightroom ကိုအခမဲ့ရွေးချယ်နိုင်သည် နှင့်ပုံရိပ်များနှင့်အတူအဖျက်မဟုတ်သောအလုပ်အတွက်အထူးပြုသည်။
Darktable ဓာတ်ပုံအပြောင်းအလဲနဲ့လုပ်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးအတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ module တွေအများကြီးကိုပံ့ပိုးပေးတယ်။ အရင်းအမြစ်ဓာတ်ပုံများ၏ဒေတာဘေ့စ်ကိုထိန်းသိမ်းထားရန်၊ ရှိပြီးသားဓာတ်ပုံများမှတဆင့်အမြင်အာရုံရှာဖွေခြင်းကိုထောက်ပံ့ရန်နှင့်လိုအပ်ပါကမူရင်းပုံရိပ်နှင့်၎င်းနှင့်အတူလုပ်ဆောင်မှုများ၏သမိုင်းကြောင်းအားလုံးကိုထိန်းသိမ်းထားစဉ်ပုံပျက်မှုများကိုပြုပြင်ရန်နှင့်အရည်အသွေးတိုးတက်စေရန်လုပ်ဆောင်မှုများကိုခွင့်ပြုသည်။ စီမံကိန်းကုဒ်ကို GPLv3 လိုင်စင်အောက်တွင်ဖြန့်ဝေထားသည်။
1 Darktable 3.0 မှာဘာအသစ်တွေလဲ?
2 Linux တွင် Darktable 3.0 ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
Darktable 3.0 မှာဘာအသစ်တွေလဲ?
ဤမူကွဲအသစ်၏အဓိကအသစ်အဆန်းများအနက်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုချက်ချင်းတွေ့ရှိနိုင်သည် အဆိုပါ interface ကိုလုံးဝဒီဇိုင်းနှင့် GTK / CSS ကိုအကူးအပြောင်းခဲ့သည်။
ယခု interface element များအားလုံးကို CSS themes များ သုံး၍ ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ အရာနှင့်အတူ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုစီးရီးကိုပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည် low- နှင့် high-resolution မော်နီတာအပေါ်အသုံးပြုရန်အတွက် optimized ။
ကအပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည်“ film tone curve” နှင့်“ equalizer tones” module များ၏ဗားရှင်းအသစ်များကိုရှာဖွေနိုင်မည်။ အဆိုပါ module တွေပုံရိပ်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်၏အစွမ်းထက်နည်းလမ်းများနှင့် သူတို့က "အခြေခံကွေး", "အရိပ်နှင့်အလင်း" နှင့် "သေံ display display" module တွေလုံးဝအစားထိုးနိုင်ပါတယ်။
ထည့်သွင်းထားသည့်စနစ် module ထဲမှာအရောင်များကိုကယ်တင်ပါ "အခြေစိုက်စခန်းကွေး" ။ဤ mode ကိုပုံမှန်အားဖြင့် ("Bright" mode) ဖြင့်ဖွင့်ထားပြီးကင်မရာမှဖန်တီးထားသော JPEG ဖိုင်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အသစ်တင်သွင်းသောဖိုင်များ၏အသွင်အပြင်ကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲနိုင်သည်။
"RGB level" နှင့် "RGB tone curve" module အသစ်များလည်းပါ ၀ င်သည်«, Lab အာကာသတွင်အလုပ်လုပ်သောလက်ရှိ module တွေအပြင် RGB အာကာသအတွင်းတစ် ဦး ချင်းလိုင်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုဘယ်။
ရွေးချယ်ထားသည့်forရိယာအတွက်ပျမ်းမျှတန်ဖိုးရွေးချယ်မှုကိုထောက်ပံ့သော Blending, Tone Curve, Color Zones နှင့် Brightness module များရှိအရောင်ရှိ eyedropper tool ကို (Ctrl + eyedropper ပုံလေးကိုနှိပ်ပါ) ။
El ယခုပြောင်းလဲမှုသမိုင်းကြောင်းသည်ယခင်ကဝှက်ထားသော "system" module များကိုပြသည်။ icon သည်သမိုင်းကြောင်းရှိ modules များ၏အခြေအနေကိုပြသသည်။
hotkeys သတ်မှတ်ဘို့ပံ့ပိုးမှု တစ် ဦး ချင်းစီ Slider သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ထိတွေ့မှုလျော်ကြေးငွေထိန်းချုပ်မှု။ ၎င်းသည်အထူးပြုလုပ်ထားသောအဝေးထိန်းခလုတ်များကို အသုံးပြု၍ လျင်မြန်စွာတည်းဖြတ်နိုင်စွမ်းကိုဖွင့်ပေးသည်။
Exif အချက်အလက်များ၊ တံဆိပ်များ၊ သူတို့၏အဆင့်အတန်းများနှင့် geotagging အချက်အလက်များ၏တင်ပို့မှုကိုသင်ထိန်းချုပ်ရန်ခွင့်ပြုထားသောတင်ပို့သည့် metadata များကို configure လုပ်ရန် dialog တစ်ခုကို dialog တစ်ခုထည့်သွင်းထားသည်။
၎င်းတို့ကိုပုံ (Ctrl + Shift + Drag) တွင်အသုံးချနိုင်ရန်အတွက်မော်ဂျူးများအားပြန်လည်စီစဉ်ရန်ထောက်ပံ့သည်။
Hald-CLUT နှင့် Cube PNG အထောက်အပံ့ပါဝင်သည့်« 3D Color Lookup Tables » module အသစ်။
တံဆိပ်များ၊ အရောင်တံဆိပ်များ၊ အမျိုးအစားများ၊ metadata များ၊ သမိုင်းကြောင်းပြင်ရန်နှင့်လျှောက်ထားသောစတိုင်များအတွက် lighttable mode တွင် undo / redo လုပ်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့သည်။
raster မျက်နှာဖုံးများအတွက်ပံ့ပိုးမှု (အထူး parametric mask) ။
ပြန်လည်ဒီဇိုင်းတိပ်ပုံများနှင့် histogram သည် Modes ။
ပရိုဖိုင်းကိုဆူညံသံဖိနှိပ်မှု module ကိုပြုပြင်မွမ်းမံ။ ကင်မရာပရိုဖိုင်းအသစ်များအတွက်ပံ့ပိုးမှုထပ်ထည့်သည်။
အနက်ရောင်၊ အဖြူနှင့်မီးခိုးရောင်အချက်များကိုလျင်မြန်စွာချိန်ညှိနိုင်ပြီး၊ စိတ်ကျေနပ်မှုကိုပြောင်းလဲစေပြီးပုံ၏ထိတွေ့မှုကိုအလိုအလျောက်တွက်ချက်ပေးသည့် "အခြေခံချိန်ညှိချက်များ" module အသစ်။
ပုံရိပ်ရွေးချယ်ရေး mode (pair တစုံနှိုင်းယှဉ်) ကဆက်ပြောသည်။
POSIX ချည်မှ OpenMP သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
SSE နှင့် OpenCL အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားပါသည်။
ကင်မရာအသစ် ၃၀ ကျော်အတွက်အထောက်အပံ့ထပ်မံထည့်သွင်းထားသည်။
Darktable မှအယ်လ်ဘမ်များကိုတိုက်ရိုက်ဖန်တီးနိုင်သည့်ဂူဂဲလ်ဓာတ်ပုံ API အသစ်အတွက်အထောက်အပံ့ (ဂူဂဲလ်မှပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့်ယခုအချိန်တွင်အလုပ်မလုပ်ပါ)
Linux တွင် Darktable 3.0 ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
အသုံးပြုသူများ Debian, Ubuntu, Linux Mint သို့မဟုတ်ဆင်းသက်လာခြင်း ၎င်းတို့အနက်မှ terminal ကိုရိုက်ထည့်ရမည်။
အသုံးပြုနေသောသူတို့အဘို့ Fedora သို့မဟုတ်၎င်းမှဆင်းသက်လာသောမည်သည့်ဖြန့်ဖြူးမှုမဆိုသူတို့အသုံးပြုသင့်တဲ့ command ကတော့
သူတို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင် openSUSE ၏မည်သည့်ဗားရှင်းကိုမဆိုသုံးစွဲသူများ သင်သည် application ကို YaST ၏အကူအညီနှင့်သို့မဟုတ် terminal မှမွမ်းမံနိုင်သည်။
အသုံးပြုသူများ Arch Linux, Manjaro, Antergos, Arch Labs နှင့် Arch Linux ၏အခြားဆင်းသက်လာမှုများ လျှောက်လွှာကိုထည့်သွင်းပါ
အသုံးပြုနေသောသူတို့အဘို့ Gentoo သို့မဟုတ် Funtoo၊ လျှောက်လွှာကိုထည့်သွင်းပါ
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ RHEL, Scientific Linux, CentOS သို့မဟုတ်ဆင်းသက်လာသောသုံးစွဲသူများ ၎င်းတို့သည်အောက်ပါတို့ကိုရိုက်ရမည်။
Finalmente သင့်ရဲ့ဖြန့်ဖြူးအတွက် update ကိုသေးရရှိနိုင်ပါလျှင်အောက်ပါအတိုင်း application ကိုစုစည်းနိုင်သည်။ ပထမဆုံး source code ကိုရပါတယ်။
တဖန်ငါတို့သည် compile နှင့် install လုပ်ဖို့ဆက်လက်:
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Darktable 3.0 ဗားရှင်းအသစ်သည်အသစ်ပြန်လည် interface နှင့်အတူရောက်ရှိလာသည်
အရေးပေါ် patch များပြီးနောက် Wireshark 3.2.0 ဗားရှင်းအသစ်သည်ဤပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူရောက်ရှိမည်